အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဆယ်ကျော်သက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းနေသုက်ပိုးရှိသည် Do?” ဟန္န Devlin ကရေးသားခဲ့, သိပ္ပံပညာကသတင်းထောက်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 18 ကြိမ်မြောက်ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2015 06.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများပြီးသားစိုးရိမ်ရန်ပဒေသာရှိသည်: အစက်အပြောက်, မိန်းကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏ "အရာ" ရဲ့အရွယ်အစား, Adrian မှဲ့ကသွင်းထားပြီထင်. မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သုက်ပိုးရှိခြင်း၏ပြဿနာကိုတကယ်တမ်းဒီ list ကိုထည့်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသလား?
ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များကဤထက်ပါဝင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုထွက်တင်ဆောင်လာသောပြီးနောက်အမှုဖြစ်ပါသည်အကြံပြုခဲ့ကြ 24,000 မိဘများနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီး. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမိဘများနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်အကြားအလွန်သေးငယ်သောမျိုးဗီဇကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ကြက်ဥသို့မဟုတ်သုက်ပိုးဆဲလ်များတွင်ကူးယူခြင်းအမှားအယွင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောခံရဖို့လို့ယူဆထားတဲ့.
အဆိုပါလေ့လာမှုကပြသ, ပျမ်းမျှအားဖြင့်, ဘိုးဘေးအမိကဲ့သို့မိမိတို့၏သားသမီးများအားဤမြူတေးရှင်းမှာအနည်းဆုံးခြောက်ကြိမ်အဖြစ်အများအပြားရက်၌. ဒီသုက်ပိုး DNA ကိုအဘရဲ့မျိုးရိုးဗီဇ sequence ကိုတစ်လျော့နည်းသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံများပွားဖြစ်ပါသည်အကြံပြု, ဖြစ်နိုင်သုက်ပိုးဆဲလ်တွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွေ့ရှိမှုအချိန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးကြက်ဥဆဲလ်ထက်ပိုကွဲပြားခြင်းကြုံခဲ့ရကြပြီ.
သာ. ဒီကဗျာပြောဆိုချက်ကို - နှင့်အများဆုံးအာရုံစိုက်တယ်သောတ - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏သုက်ပိုးဆဲလ်တွေထဲမှာအမှားနှုန်းကိုခန့်ဖြစ်ပါသည် 30% လူပျိုတို့အဘို့အကြောင်းထက်ပိုမိုမြင့်မား.
သုတေသီဆယ်ကျော်သက်ဘိုးဘေးများ၏သားသမီးများကိုထိုကဲ့သို့သောမှာအခု Autism ရောဂါအဖြစ်ပုံမမှန်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားစွန့်စားမှုရှိသည်ဘာကြောင့်ဒီကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ပြော, schizophrenia နဲ့ spina bifida.
အဆိုပါစက္ကူရဲ့စာရေးဆရာ, ပေတရုက, Forster, ကပြောပါတယ်: "15 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ၏ကလေးများအကြောင်းရှိသည် 30% လူပျို၏ကလေးများထက်ပိုပြီးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း. ဒါဟာ J-shaped ဖြန့်ဖြူးပါတယ်။ "
ဒီဖြစ်နိုင်လောက်၏မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များ၏အန္တရာယ်ကိုမှဘာသာပြန်ထားသော 2% ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများများအတွက်, ပျမ်းမျှစွန့်စားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 1.5%, ဟုသူကပြောသည်.
Forster ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာတပြင်လုံးကိုသုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကအစမှာပိုပြီးအမှားကျရောက်နေတဲ့ကြောင်း ... ကိုယ့်သေးအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
သူကသီအိုရီကိုပင်စိတ်ကူးသတိပေးခံရခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်, အခြားသတင်းစာဆရာများက, ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများထက် ပို. masturbated လျှင်, သူတို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာဒီ "suboptimal" ကာလအားဖြင့်မိမိတို့သွားရာလမ်းအလုပ်လုပ်နိုင်စေခြင်းငှါ,.
ဆယ်ကျော်သက်ဤအကြံပြုချက်ကိုဂရုပြုမပြုမီ (သူတို့ပြီးသားဤလှုပ်ရှားမှုဖို့အချိန်အတော်လေးတွေအများကြီးမြှုပ်နှံထားကြဘူး?), ကမှာရှာဖွေနေရကျိုးနပ်မယ့် စက္ကူကိုယ်တိုင်က, သည် Royal Society Journal မှတရားစွဲဆိုထား B ကိုအတွက်.
ထူးဆန်းသည့်အရာ J-shaped ကွေး၏ပြီးပြည့်စုံသောမရှိတော့ခြင်းပါပဲ. ဤတွင်ဂရပ်င်, သညျအကြှနျုပျအားဖြောင့်လိုင်းတူ.
ဘိုးဘေးတို့နှင့်မိခင်များအတွက်အ Germline str ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများ. ဓါတ်ပုံ: သည် Royal Society ၏တရားစွဲဆိုမှု
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက်ဒေတာအချက်အဘို့အကြောင်းထက်မြူတေးရှင်းအနည်းငယ်ပိုမြင့်မားအရေအတွက်ပြသမည်အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 20- အသက် 30 နှစ်အရွယ်အသက်အရွယ်အကွာအဝေးမှ, သို့သော်လည်းနှင့်အတူထပ်ပုံပေါ် 95% ထိုကားချပ်လမ်းကြောင်းသစ်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ. ကျွန်မက "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ၏ပိုးဆဲလ်တွေအိုမင်းခြင်းအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုချွင်းချက်ရှိပါတယ်" ဟုကောက်ချက်ချဖို့မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မမြင်နိုင်, ရေးသားသူပွုသကဲ့သို့.
သင်သည်ထိုလမ်းကြောင်းတွင်ဆင်းသွားလျှင်, သုက်ပိုးမှာ bit နဲ့ dodgy ဝင်ဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်လည်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, 30, ထိုအခါမူကား, အလယ်တန်းအရွယ်၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်တဖန်ပြန်, ထဲမှာတစ်နှံရှိဟန်ကြောင့် 30-35 အမျိုးအစား. တစ်ဦးကရိုးရှင်းပါတယ်ရှင်းပြချက်ကိုဒေတာရုံ bit နဲ့ဆူညံဖြစ်ပါတယ်.
အယ်လန် Pacey, ရှက်ဖီးတက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခ andrology, သဘောတူ: "ဒါကငါ့အဖို့အဓိပ္ပာယ်အောင်မပါဘူး. ငါသည်တ J-shaped ဆက်ဆံရေးဟာမမြင်မမှတ်ကြနဲ့, ဇီဝဗေဒ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကိုယ်ကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘာမှမစဉ်းစားလို့မရဘူး။ "
Forster အများအပြားတွင်လူဦးရေလေ့လာမှုများမှထောက်ပြခဲ့သည်, ဆယ်ကျော်သက်ဘိုးဘေးအမျိုးမျိုးမမှန်မှုများနှင့်အတူကလေးများရှိသည်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေခြင်းငှါအရာရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း. သို့သော်ထိုသို့သောရလဒ်တွေမျိုးရိုးဗီဇအကြောင်းတရားများသို့မဟုတ်လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေညွှန်ကြားဖို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိပြောရခက်သည်. ကျွန်တော့်အတွက်, ဒီနောက်ဆုံးပေါ် studydoes ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်များစွာမလုပ်ဆောင်. Pacey ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး: "ငါဆယ်ကျော်သက် dads များအတွက်မဆိုအလွန်ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမမြင်နိုင်ကြဘူး။ "
ထိုအ dads မဟုတ်သောသူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများများအတွက်, ဘအပေါ်စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့၎င်းတို့၏အသက် 20 အရွယ်အထိစောင့်ဖို့တခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ရှိပါတယ်.
← ယခင် Post မှ Sony ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေလုပ်လို့3လျင်မြန်စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] →